Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Na-etolite ndu otu n'oge ejighi n'aka
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
Akụkụ niile nke njem na njem nlegharị anya, ma na mpaghara nzuzo ma na mpaghara ọha, amụtala na n'ahịa na-adịghị akwụ ụgwọ taa; obodo na ọbụna mba niile kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma ọha.
Dr. Peter Tarlow, onye isi oche nke World Tourism Network, na onye guzobere Tourism Titbits dere akụkọ a dị mkpa na ndị isi otu n'oge COVID-19.
Ọtụtụ mgbe, ndị ọkachamara njem nlegharị anya na-ekwu maka "mmekọrịta na ndị isi otu", mana ọ dị mwute na ihe ọtụtụ n'ime ha pụtara n'okwu ahụ bụ: "ka anyị hụ ihe ị ga-emere m."
Njem nlegharị anya nke ụlọ ọrụ, Otú ọ dị, n'oge a nke nsogbu ihu igwe metụtara, agha, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọrịa na-efe efe na-esiwanye ike ijikwa nke ọma.
Ndị obodo na ọbụna mba niile kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ iji nweta ọdịmma ọha.
Iji nyere gị aka iru ọkwa a nke imekọ ihe ọnụ ahịa na ịga nke ọma, tụlee ụfọdụ echiche ndị a:
Hụ ndị ọrụ ibe gị ka ha nhata karịa ka ndị ị kwesịrị ịnabata. Ọtụtụ mgbe, anyị na-elekarị ndị ọrụ njem nlegharị anya naanị site na prism nke azụmahịa anyị. Ọ dịghị otu njem nlegharị anya azụmahịa; kama njem na njem nlegharị anya bụ usoro ndụ nke ọtụtụ akụkụ ndụ na-arụkọ ọrụ ọnụ n'otu aka ahụ dịka ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla daa, usoro ahụ dum ga-enwe mmetụta mmetụta ya.
· Zụlite nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi. Ọ dị mkpa na e nwere ebumnuche njem nlegharị anya na-aga n'ihu n'otu usoro ahụ. Ọ bụ ezie na ndị dị iche iche nwere nkà na ikike dị iche iche, ihe dị n'okpuru bụ na iru eru bụ ọrụ onye ọ bụla. Ndị ọrụ njem nlegharị anya kwesịrị icheta na ha nọ n'ọnọdụ ọkachamara, ọ dịghị mkpa ka ha bụrụ ndị enyi nke ndị ọrụ ibe ha, mana ha kwesịrị ịzụlite ezigbo mmekọrịta ọrụ.
· Atụla egwu ịga na eriri afọ gị. Enwere oge mgbe n'agbanyeghị ihe ozi yiri ka ọ na-ekwu na eriri afọ gị na-agwa gị na nke a abụghị mkpebi ziri ezi. Ọtụtụ mgbe, ọgụgụ isi nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa n'ime mkpebi. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe anyị chọrọ ileghara data anya, elegharala mmetụta afọ gị anya.
Gbalịa ịzụlite ahụmịhe nkịtị site na iwepụta oge gị na ndị ọrụ ibe. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ekpe ndị ọzọ ikpe na-ezighị ezi n'ihi na anyị na-eche na anyị ghọtara azụmahịa onye nke ọzọ. Ọ bụghị echiche ọjọọ maka ndị nduzi CVB ka ha nọrọ ntakịrị oge na-arụ ọrụ n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ebe nkiri iji ghọta site n'aka mbụ ihe ịma aka na ohere dị. N'otu aka ahụ, ndị na-azụ ahịa nwere ike na-akatọ mbọ ahịa obodo nwere ike nọrọ otu ụbọchị n'otu CVB ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya iji mụta ihe dị n'ime akụkọ gbasara ịzụ ahịa mpaghara ma ọ bụ ọzọ.
· Zụlite ihu n'otu. N'agbanyeghị ihe esemokwu dị n'ime ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ, ha kwesịrị ịdịgidesi ike n'ime. Ọ na-emebi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke ukwuu mgbe a na-eme ka ọhaneze pụta ma ọ bụ zipụ ya na ndị nta akụkọ. Ihe na-eme n'ime ime ụlọ kwesịrị ịdị n'ime ụlọ. Kụziere ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na ibu ọrụ na-emepụta ibu ọrụ ọhụrụ yana na ọ na-esiri ike (na ndị ọkachamara karịa) ịrụ ọrụ na-ejikọta otu ọnụ karịa ịkwasa ya.
· Kuziere ibe ya ihe. Gaa na ebe ndị ọzọ wee detuo ihe, wee kesaa ndị ọrụ ibe gị ihe ị mụtara. Obodo gị ekwesịghị ịbụ ndị mbụ nwere echiche ọhụrụ, kama mụta ihe n'aka ndị ọzọ wee mezie echiche ha. Were ihe ndị dị mkpa n'echiche nke ọ bụla wee megharịa echiche ndị ahụ na ọnọdụ gị.
· Mepụta usoro ndụmọdụ. Njem nlegharị anya bụ ogige siri ike nke na anyị niile chọrọ ndị ndụmọdụ. Ndị ndụmọdụ kwesịrị ịbụ karịa ndị nkuzi. Ndị ndụmọdụ kwesịrị ịbụ ndị na-amanye anyị ịhụ nnukwu foto zuru oke yana otu akụkụ nke njem nlegharị anya si kwekọọ ọnụ. Ezigbo ndị ndụmọdụ kwesịkwara ijere onye ọ bụla n'ime anyị ozi dị ka ndị ọrụ ịkparịta ụka n'Ịntanet nwere ike ịme ka anyị mata ndị na-abụghị ndị ahịa anyị. N'ime ụlọ ọrụ ebe ndị ahịa anaghị agwa anyị mkpesa ha n'ezie na anaghị alaghachi azụ, ndị ọrụ njem njem niile chọrọ ndị nkuzi nwere ike rụọ ọrụ dị ka ndị ntụkwasị obi, ndị na-atụ anya, ndị na-enyocha eziokwu ma n'otu oge ahụ na-enyere ha aka ịchọta ụzọ ọhụrụ maka nsogbu na-adịgide adịgide na ọhụrụ ịma aka.
· Kpebie otú ị ga-esi ekenye ihe onwunwe dị oké ọnụ ahịa. Ọ nweghị obodo ma ọ bụ obodo nwere akụrụngwa na-akparaghị ókè. Buru ụzọ mee nyocha iji hụ na oke akụrụngwa gị nwere ezi uche ma n'oge dị mkpirikpi ma n'ime ogologo oge. N'ịmepụta oke akụrụngwa, malite iche echiche n'ime igbe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere mmekọrịta dị n'etiti nchekwa na akara ngwaahịa na post 9-11 ụwa? Mgbasa ozi oge gboo ọ bara uru maka ahịa igwe mmadụ ma ọ bụ niche gị? N'ikpeazụ echefula na a na-enwe oge ọ bụla na njem nlegharị anya. Nke ahụ pụtara na n'oge a ga-eso-Covid anyị ga-enwe ike imepụta ihe. Na omenala, oge ihe ịga nke ọma gosipụtara ezi ọrụ site na ọtụtụ afọ gara aga. N'otu aka ahụ, ịkwọ ụgbọ mmiri kama ịrụ ụlọ nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu n'ime afọ ole na ole.
· Na-arụ ọrụ nke ọma, na echefukwala ịmụmụ ọnụ ọchị! Gbalịa chọpụta ka amụma nwere ike isi rụpụta ihe dị mma karịa otu. Ọbụghị naanị na anyị kwesịrị ịdị njikere ịmegharị ngwaahịa ochie, mana ịrụ ọrụ nke ọma nwekwara ike ịpụta ịmegharị mkpọsa azụmaahịa mbụ, amụma mbụ ma ọ bụ ọbụna imegharị ka anyị si eji ala. Cheta na oge na-agbanwe na amụma nke nwere ike ọ gaghị aga nke ọma n'otu oge nwere ike ịba ezigbo uru n'oge ọzọ.
· Kpọọ ndị kacha mma ị nwere ike. Ụlọ ọrụ nlegharị anya na-adabere na ndị mmadụ na nkà ndị mmadụ. Ọ dịghị ihe nwere ike ibibi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya karịa ndị na-arụ ọrụ na ya na-adịghị amasị ndị mmadụ. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ afọ ojuju anaghị ekwe nkwa ọrụ ndị ahịa dị mma, ndị ọrụ iwe na-enwekarị nkwa ọrụ ndị ahịa na-adịghị mma. Wepụta oge iji nkwanye ùgwù na-emeso ndị mmadụ ihe ma nye ha ọzụzụ kacha mma ọ bụghị naanị na mpaghara nka nke aka ha kamakwa n'akụkụ ndị ọzọ nke njem nlegharị anya. Mgbe ndị ọrụ mere ihe na-adịghị mma ezipụla onye nnọchi anya kama kama ịdọ ndị mmadụ aka ná ntị site n'elu. Cheta na n'agbanyeghị otú ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya enweghị mmasị n'ịdọ ndị ọzọ aka ná ntị, e nwere oge mgbe ọ na-enweghị ihe ọzọ.
Ndị ọzọ na World Tourism Network na www.wtn.travel